मुस्ताङ जिल्लादेखि मोटरसम्म
गृह पृष्ठकभरस्टोरीराष्ट्रियदेशअर्थविश्व खबरसप्तरंगखेलकुददृष्टिकोणसम्पादकीयआगन्तुक	मुख्य समाचार
बन्दले जनजीवन प्रभावित »	लोकमानविरुद्धको मुद्दा सरेको सर्‍यै »	एक सय ५७ न्यायाधीशले लिए शपथ »	Tuesday, Jun 18, 2013<	/p>	मुस्ताङ जिल्लादेखि मोटरसम्म
TwitterDownload SocButtonsसियो उत्पादन पनि नहुने मुलुक भनेर सबैले गफको विषय बनाइरहेको वेला मोटरगाडी उत्पादन गर्ने सोचाइ धेरैलाई 'पागलपन' लाग्ने गर्दथ्यो । तर, गोल्छा अर्गनाइजेसन भने स्वदेशी ब्रान्डको मोटर उत्पादन गर्ने सोचाइलाई मूर्तरूप दिन अघि बढिरहेको थियो । यो मुलुकमा उदारवादी अर्थव्यवस्था सुरुवात हुन थालेको ०५० पछिको कुरा हो ।हो, यसलाई मूर्तरूप दिनका लागि गोल्छा अर्गनाइजेसनले 'हुलास मोटर्स्ा प्रालि' को स्थापना गरियो । त्यसपछि हुलासले मोटरको नामकरणका लागि 'शेर्पा' र 'मुस्ताङ' को छनोट गर्‍यो । हुलास मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र गोल्छाले 'नेपाली टि्रपिकल' नाम राख्न यी दुई नाम छनोट गरिएको बताए । उनले हुलास मोटर्सले ०५३ देखि व्यावसायिक ढंगले मोटर उत्पादन गर्न थालेको जानकारी दिए ।हुलास मोटर्सले सुरुमा 'शेर्पा' मोटरको उत्पादन गरेको हो । शेर्पा मोटरको उत्पादन भएको ८ वर्षपछि 'मुस्ताङ' को उत्पादन गर्न थालियो । कम्पनीले शेर्पा मोटरमा देखिएका कमीकमजोरी हटाएर मुस्ताङ मोटरको उत्पादनको थालनी गरिएको जनाएको छ । मुस्ताङ एकप्रकारको 'जिप' गाडी हो । यो प्राविधिक रूपमा '२१४० सिसी' को डिजेल इन्जिन हो । मुस्ताङको कारखाना मोरङको विराटनगर-१७ मा रहेको छ । अहिलेसम्म मुस्ताङ गाडी पहाडीक्षेत्रमा बढी दौडिरहेको सो कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रफुलचन्द्र दासले जानकारी दिएका छन् ।
मुस्ताङको ब्रान्ड एवं पार्टपुर्जा
मुस्ताङ नेपालको एउटा जिल्लाको नाम हो । मुस्ताङ जानेले त्यहाँको घोडा शक्तिशाली सवारीसाधन हुने बताउँदै आउने गरेका छन् । यसैले मुस्ताङ मोटर पनि शक्तिशाली मान्छन्, त्यस कम्पनीका हर्ताकर्ता । हुलास मोटर्सका महाप्रबन्धक दास पनि पहाडीक्षेत्रमा राम्रो 'तान' दिनसक्ने सवारीसाधन नै स्वदेशी ब्रान्डको मुस्ताङ भएको दाबी गर्छन् । कम्पनीले नेपाली भौगोलिक अवस्था र यहाँका बाटाघाटालाई मध्यनजर गरेर नै मुस्ताङ मोटरको उत्पादन गरिँदै आएको जनाएको छ । त्यसो त इन्जिनको 'शक्ति नापक' लाई पनि 'हर्स पावर' -घोडाको शक्ति) का रूपमा लिइन्छ । यसले गर्दा पनि स्वदेशी मोटर ब्रान्डका लागि मुस्ताङ सर्वाेकृष्ट ठहरिएको कम्पनीको भनाइ छ । यसको इन्जिन र गियरबक्स चीनबाट आयात गरिन्छ । त्यसैगरी भारतबाट स्टेरिङ र च्यासिज ल्याउने गरिए पनि बढी सिट र 'होलसोल फिटिङ भने कम्पनीले आफैँ बनाउने गर्छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गोल्छाले विश्वको प्रसिद्ध मोटर कम्पनीले पनि सबै पार्टपुर्जा आफैँले उत्पादन नगर्ने भएकाले मुस्ताङ पनि त्यही कोटीमा पर्ने जिकिर गरे । कम्पनीले नेपालमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मोटर आयात भइरहेकाले सरकारले त्यसको विकल्पमा स्वदेशी मोटर उत्पादनमा अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसैका लागि कम्पनीले सामान बोक्ने 'सिंगल क्याब' र मानिस बोक्ने 'डबल क्याब' गरेर २ प्रकारका मुस्ताङ मोटर उत्पादन गरिरहेको छ । मुस्ताङको सिंगल क्याब पहाडीक्षेत्रमा लोकपि्रय हुन थालेको कम्पनीका महाप्रबन्धक दासले बताए । मुस्ताङको बजारमूल्य १३ लाख ८८ हजार रुपैयाँदेखि १७ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गर्छ ।
प्रधानमन्त्री र मुस्ताङ सम्बन्ध
मुस्ताङ मोटरको उत्पादन करिब १ दशकअगाडि भए पनि यसको चर्चा भने डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएपछि स्वदेशी ब्रान्डको मोटर चढ्ने प्रतिबद्धतापछि चुलिएको हो । यसैले मुस्ताङ मोटर र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको 'सम्बन्ध' अब गहिरो भएर गएको छ । यद्यपि मुस्ताङसँग जोडेर प्रधानमन्त्रीसँग अनेक 'प्रोपोगन्डा' पनि फिजिइरहेका छन् । हुलास मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक गोल्छाले पनि यसलाई स्वीकारे । उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीजीले मुस्ताङको चर्चा बढाइदिएकाले हामीलाई थप हौसला मिलेको छ ।' उनले यसबाट मानिसमा मुस्ताङ खरिद गर्ने आकांक्षा बढेर गएको जानकारी दिए । उनले मुस्ताङ विशुद्ध व्यावसायिक उत्पादन भएको र यसलाई सबैले सस्तो सवारीसाधन पनि मान्ने गरेको उनले बताए । कम्पनीका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुस्ताङ चढ्न थालेपछि यसको बिक्रीवितरणमा करिब एक तिहाई वृद्धि भएको छ ।प्रस्तुति ः सुभाष न्यौपाने
बन्दले जनजीवन प्रभावित लोकमानविरुद्धको मुद्दा सरेको सर्‍यै एक सय ५७ न्यायाधीशले लिए शपथ
बमले थला परेका गाविस सचिवको पारिश्रमिक रोकियो
गाउँकै चेली बेच्नेलाई २० वर्ष कैद
नौमती संरक्षणमा ब्राह्मण बादल देखिए बन्द हुन्छ विद्यालय
भारतले पाकिस्तानलाई हरायो
फेडेररलाई वर्षको पहिलो उपाधि
चुरोट तान्दा कोल कारबाहीमा सर्वाधिक लोकप्रिय
रामप्रसादले षड्यन्त्र गरे 'राष्ट्रपतिको छोरो भएकैले चुनाव हारें' त्यो कालो शुक्रबार बाबुआमाले जलाए ६ सन्तान नक्कली हिसिला बनेपछि विपना मालामाल हाम्रो पनि ग्ल्यामर छ मेरो एसएलसी, छोराको एसएलसी जंगलमा दुधेबालिका अमिक शेरचनको कन्चटमा पेस्तोल तेस्र्याएछन् सहर एक, चोर अनेक फिचर/ अन्तर्वार्ता अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि एमबिबिएस डाक्टर
Home	About Us	Archives	Site Map	RSS	Terms & Conditions	Feedback	Naya Patrika © 2013 | All rights reserved